Posted by Aagan Team at 9:48 AM7comments:
सोसल नेट्वोर्कइङ साइट र हामी
जमाना ईन्टरनेटको छ, एक्छिन नेट भएन भने दिउसै अध्यारो भए जस्तो लाग्छ । छिन छिनमा हाइ फाइभ र फेसबूक नखोली नहुने भाको छ आज्कल हामीलाई । कस्ले कस्तो स्ट्याटस राख्यो, कसैको फोटो कमेन्ट पो आको छ कि, ग्रुपमा नयाँ केही पोस्ट भको छ कि अनी प्रोफाइल कमेन्ट पो आछकी भन्ने कौतुहलताले छिन्छिनमा सताउछ आज्कल सम्पूर्ण सोसल नेट्वोर्किङ साइटका सदस्यहरुलाई । फेरी हुन पनी साथीहरु बिच संपर्कमा रहिरहने र उस्का गतिबिधिहरु थाहा पाउने तथा आफ्नो बाड्ने गतिलो माध्यम पनि बनेका छन फेसबुक, हाइ फाइभ जस्ता थुप्रै सामाजिक सन्जाल्हरु । मेरै कुरा गर्दा पनि प्रचन्डको रजिनामा मैले सबै भन्दा पहिला फेसबूकबाट नै थाहा पाएको थिए ।
बडो गज्जब छ सामाजिक सन्जाल्हरुको क्रेज । तपाईं कत्तिको क्रेजी बन्नुभएको छ ? के लाग्छ तपाईंलाई सामाजिक सन्जाल्हरुमा जोडीनु ठीक हो ? कि वाइयात हो समयको बर्बाद मात्र ? रमाइला-नरमाइला अनुभवहरु बाड्ने होइन त?
Posted by Aagan Team at 6:26 PM 12 comments:
बिदेश: पहिला लड्न, अहिले पढ्न अब यसपछी के गर्न?
हामी नेपालीहरु लाहुर पस्ने चलन धेरै पुरानो हो । नेपालीहरु बिदेशिने ईतिहास हेर्दा हाम्रो बाबु-बाजेहरु गुर्खा सैनिकको रुपमा बेलायत तथा भारत छिरे त्यसैगरी ब्यापारको सिल्सिलामा तिब्बत, बर्मा, चिन हुँदै अन्य देशहरु पनि छिरे । पछी बिस्तारै कामको खोजिमा मलेसिया, दुबइ, कतार, साउदी, जापान, अमेरिका, यूरोप जाने क्रम बिस्तारै बढ्यो तर अहिले बिदेश जानु त फेसन जस्तै भएको छ । पढ्न होस् वा काम गर्न, कानुनी रुपमा होस् वा गैरकानुनी रुपमा अहिले नेपाली युवाहरु बिदेशिने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । नेपालमा त्रिभुवन बिश्वबिद्यालय, काठमाडौं विश्वबिद्यालय जस्ता उत्कृष्ट अध्ययन स्थल हुँदाहुँदै आजकाल प्रत्यक दिन सयौ युवायुवतिहरु लाखौं खर्च गरेर अध्ययनको लागि बेलायत, अष्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, जापान, क्यानाडा, चिन, लगायत अन्य थुप्रै मुलुकतर्फ उड्ने गर्दछन । तपाईंलाई के लाग्छ, नेपालमा पढ्ने बातावरण नभएर उनिहरु बिदेशिएका हुन त? कि बहिर अध्ययन गर्ने निहु मात्र हो?
Posted by Aagan Team at 6:26 PM6comments: